1998 – Year – Channel Myanmar 8
Central Station (1998) Central Station (1998) ~ IMDb - 8/10, Rotten Tomatoes - 94% ~ကျွန်တော့်မိဘတွေကို ကျွန်တော်တရားစွဲလို့ရလား ဆိုတဲ့ Capernaum ဆိုတဲ့ကားလေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲလိုကားကောင်းမျိုးလေးတွေကို ထပ်ကြည့်ချင်နေတာကြာလှပြီပဲဆို‌ပါတော့။ ဆိုတော့ကာ အဲလိုဇာတ်ကောင်စရိုက်အသားပေးတဲ့ကားမျိုးလေးကို ၁၉၉၈ မှာထွက်ရှိတဲ့ Central Station ဆိုတဲ့ ဟောဒီကားလေးမှာ သွားတွေ့ရတယ်ဗျ။အသက်တစ်ရာမနေရ၊ အမှုတစ်ရာပွေရတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ လူတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုဖော်ညွှန်းပြသတဲ့ ဒီလိုကားကောင်းလေးတွေဟာ တော်ရုံထွက်ခဲသလို၊ ကောင်းခဲတာမို့ ဇာတ်လမ်းအေးအေးလေးနဲ့ တမြည့်မြည့်ခံစားရင်းကြည့်ချင်တဲ့သူကြည့်ရမယ့် ကားလေးပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ IMDb ဟာလည်း overrated ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေဝေဖန်တဲ့ကြားကနေ တကယ်ထိုက်တန်လို့ တကယ်ရထားတဲ့ IMDb ပါပဲ။ဒီကားလေးကတော့ Drama/ Road ဆိုတဲ့အပြင် လူ့သဘာဝသရုပ်အပြင် Tom Hanks ကြီးရဲ့ News of the World လို ခရီးသွားမှတ်တမ်းဇာတ်လမ်းမျိုးဆိုလည်း ဟုတ်တယ်ဗျ။ ...
City of Angels (1998) City of Angels (1998)အထိအတွေ့၊ အနံ့အသက်၊ အရသာ အစရှိတာတွေအပြင် နာကျင်ခြင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပါ ခံစားလို့မရတဲ့ နတ်သားတစ်ပါး...လူတွေသေဆုံးခါနီးတိုင်း သူသွားခေါ်ပေး နှစ်သိမ့်ပေးနေကျ...ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့ ဆေးရုံမှာ သူသွားခေါ်ရတဲ့ သေဆုံးခါနီးလူနာတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးသွားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မလေးကိုတွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ နတ်သားလေးရဲ့ဘဝက လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားပါ​တော့တယ်...အချစ်ဆိုတာကို သူနားမလည်သေးပေမယ့် ကောင်မလေးနားမှာပဲ သူနေချင်တယ်၊ အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင် စပ်စုချင်တယ်... ဒါပေမယ့် သူဟာ နတ်သားတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်... အဲဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံမှာ နတ်သားဘဝကနေ လူ့ပြည်ဆင်းလာပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ နတ်သားလေးက ဆရာဝန်မလေးနဲ့ နီးစပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်..."သူ့ကို မထိတွေ့ရတဲ့ ထာဝရဘုံမှာ နေမယ့်အစား သူ့ဆံနွယ်လေးကို တစ်ခါလေး ရှူရှိုက်ရဖို့ သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို တစ်ခါလေး နမ်းရဖို့ သူ့လက်ကလေးကို တစ်ခါလေး ကိုင်ရဖို့အတွက် ငါ လုပ်မှာပါ" တဲ့...မင်းသားကြီး Nicolas Cage ဘယ်လိုတွေ ဘယ်လောက်အထိရိုမလဲ ...
Meet Joe Black (1998) ဒီတစ်လော မင်းသားကြီး Brad Pitt ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေပြန်ကြည့်ဖြစ်ရင်း Meet Joe Black ဆိုတဲ့ ကားကိုCM မှာ တင်ပေးဖို့ သတိထားမိသွားပါတယ်ဒီကားကို တိပ်ခွေခေတ်က ခဏ ခဏ ကြည့်ဖူးပါတယ်DVD ခွေတွေ ထွက်တဲ့အခါလဲ BluRay အခွေဝယ်သိမ်းတဲ့ အထိ ကြိုက်ခဲ့မိပါတယ်...ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာ မင်းသားကြီး Brad Pitt သရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး Brad Pitt ရဲ့ အသက်က၂၁ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်...နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုချောမောနေမှုကပျိုတိုင်း ယိုင်လဲလောက်ပါတယ်...အပြုံး အကြည့် ခပ်ပေပေ ပုံစံလေးတွေက အစဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာမျိုးပေါ့...ဒီရုပ်ရှင်ကားကလဲ မိသားစုလိုက်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ကားမျိုးဗျ မိသားစု မေတ္တာကိုပိုအသားပေး ထားတာမျိုးပဲဇတ်လမ်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်စပွိုင်လာ ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်နိုင်တာမို့ ကြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင်ဆက်မဖတ်နဲ့တော့....ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခု ရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဘေးလ် ဟာတစ်ညသော ...
The Land Before Time VI: The Secret of Saurus Rock THE LAND BEFORE TIME VI Channel Myanmar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The Land Before Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါ တယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူတွေအကြောင်းပါ …. Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂျ်လူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့ ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေ အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး လစ်တဲဖု စပိုက်ခ် ဆယ်ရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆော သူငယ်ချင်းလေးတစ်စုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် …… ကမ္ဘာဦးတုန်းက ...
The Untold Story2ဒီတခါတော့ cmပရိသတ်ကြီးအတွက် ၁၉၉၈ခုနှစ်က ရိုက်ကူးပြီး IMDb 5.5ရထားတဲ့ horrorဇာတ်လမ်းလေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်တ‌ဲ့ Cheung ဟာ တနေကုန် ပင်ပန်းတာတွေ များလို့ ညရောက်တဲ့အခါ ဇနီးKuenဖြစ်သူကို စိတ်မကျေနပ်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူး. အဲ့ဒါကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူဟာ စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် အမြဲယောကျာ်းတစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် ရှာပြီး ဆန္ဒကို ဖြေသိမ့်နေခဲ့ပါတယ်. လူရိုးကြီးCheungဟာလဲ ဇနီးသည်ကို ပြောမရတာကြောင့် လွှတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ တနေ့မှာတော့ kuen ရဲ့ညီမ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ Fungဟာ ဟောင်ကောင်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်. Fung ဟာအမဖြစ်သူရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တွေ့တဲ့အခါမှာ ရွံရွာမုန်းတီးပြီး လူရိုးကြီး Cheungကို သနားချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒါနဲ့ fungဟာ လူရိုးကြီး Cheungကို မာယာတွေနဲ့ ဖြားယောင်းပြီး သူ့ကိုချစ်ခင်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်. horrorကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ.... လူသတ်ခန်းနဲ့ ချစ်ကျွမ်း၀င်ခန်းတချို့ပါ၀င်တာကြောင့် အသက်၁၈နှစ်အောက် မကြည့်သင့်ပါ....
Saving Private Ryan (1998)[1080p 5.1ch] Saving Private Ryan (1998) IMDB....8.6,,,,Rotten .....93% စစ်ကားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ။ ဒီကားလေးက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အခြေပြုပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဖြစ်တဲ့Normandy ကမ်းခြေ တိုက်ပွဲကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပြီး Normandy ကမ်းခြေကို အမေရိကန်စစ်တပ်တွေ ဝင်သိမ်းတဲ့ ရိုက်ကွက်ကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင် ရှုစားရမှာဖြစ်တယ်။နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Tom Hanks (Catch me if you can), Matt Damon (Bourne Trilogy), Vin Diesel(Fast & Furious Series) တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ချက်၊ ဇာတ်လမ်း ကပြောစရာမရှိသလိုဒါရိုက်တာကလည်း နာမည်ကြီး Steven Spielberg (Jurassic Park, Catch me if you can) ဖြစ်လိ့ု ပြောစရာမလိုပါဘူး။အော်စကာဆု ၅ခုကို ဆွတ်ခူးနိူင်ခဲ့သလို တစ်ခြားဆုပေါင်း ၇၀ကျော်ကိုလဲ ရယူနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ IMDBမှာလဲ Rating ...
Saving Private Ryan (1998)[1080p 5.1ch]
Fallen(1998) Fallen(1998) IMDb....7.0 ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ ယုံကြည်တာလက်ခံထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လက်မခံတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကိုယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်နေတာတွေအားလုံးက အမှန်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လက်ခံယုံကြည်ကြမှာလား။ ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားက မှားနေခဲ့ရင်ရော လက်ခံနိုင်ပါမလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသားကြီးမင်းသားကြီး Denzel Washington က ဒီကားထဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင် စုံထောက် John Hobb အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်...Hobb က အရမ်းတော်တဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူနောက်ဆုံးဖမ်းခဲ့တဲ့သူကို သေဒဏ်မပေးခင်မှာ ထူးခြားတာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သတိမထားမိဘဲ နောက်ထပ်ပုံစံတူလူသတ်မှုတွေပေါ်လာချိန်မှာတော့ ပြန်စုံစမ်းရင်း ထူးခြားတာတွေကိုသတိထားမိလာပြီး သူမယုံချင်တဲ့ အရာတွေကိုလည်း ယုံခဲ့ရတယ်...လူသတ်သမားက သေဒဏ်ကျခံပြီးဖြစ်တဲ့ တရားခံရဲ့ ပုံစံအတိုင်းသတ်ပြီးတော့ Hobb အတွက် သတင်းစကားတွေချန်ထားခဲ့ခြင်းပါ။အဲဒါတွေကိုစုံစမ်းရင်း သူတစ်ခုသိလာရတာတော့ သူမမြင်ဖူးတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မှ ဒီလူသတ်မှုတွေကိုနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။စုံထောက်အက်ရှင်ကားတွေလည်းကြိုက်တယ်..မင်းသားကြီး Denzel Washington လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ကားးးးးးး....IMDB Rating အနေနဲ့ကတော့7အထိရရှိထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ D3monပဲဖြစ်ပါတယ်...File Size : (994MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:04:00 Genre : Action , Crime , Drama Subtitle ...
The Siege (1998) ကျွန်တော်တို့ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို တိုက်ခိုက်နေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းနေသူများကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အိုဘားမား သမ္မတဖြစ်ခါစ အရှေ့အလယ်ပိုင်းခရီးစဉ်မှာ ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ ၁၉၈၀ ကျော်မှာ ဆိုဗီယက်က အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကျူးကျော်တုန်းက အမေရီကန် CIA တွေက ဘင်လာဒင်တို့လို့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ကို တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ် မွေးမြူခဲ့တယ် ။ CIA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ အမေရီကန်ရဲ့ အကျိူးစီးပွားကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဆိုဗီယက်ရဲ့ ဩဇာအာဏာကို ဟန့်တားဖို့ပေါ့ ။ ၁၉၉၀ ကျော် အမေရီကန် သမ္မတ ဂျော့ဘုရှ် လက်ထပ်မှာတော့ အီရတ်က ဆတ်ဒမ်ဟူစိန်ကိုအမေရီကန်က ဖြုတ်ချချင်တယ် ။ အီရတ်ပြည်တွင်းမှာ ဆတ်ဒမ်ကို တော်လှန်ချင်သူတွေကို လက်နက်တွေပေးတယ် ၊ အကြမ်းဖက်နည်းတွေ သင်ပေးတယ် ၊ ဗုံးလုပ်နည်းတွေ သင်ပေးတယ် ။ အမေရီကန် သမ္မတသစ် ကလင်တန် လက်ထပ်မှာ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကပြောင်းသွားတယ် ...
Enemy of the State (1998) Enemy of the State (1998) IMDb - 7.3/10_____Rotten - 72% ဒန်နီယယ်ဇာဗစ်ဟာ အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကြေး နဲ့ ကနေဒါငန်း တွေကိုလေ့လာနေသူတစ်ဦးပါ ။ တစ်နေ့ N.S.A အရာရှိတစ်ဦး က လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒါကို ဒန်နီ ရဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကင်မရာ ကမှတ်တမ်းတင်မိသွားခဲ့တယ်။ N.S.Aကလည်းဒါကိုသိပြီး ဒန်နီယယ် နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ် ။ ဒင်း ( willsmith) ဟာမိသားစုကို ချစ်ပြီး ဂိုဏ်းတွေနဲ့ ပြသနာတက်နေတဲ့ အလုပ်သမားရှေ့နေ တစ်ဦးပါ ။ ခရစ္စမတ် အတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒန်နီယယ် နဲ့ ဆုံမီကြရာ ကနေ သူ့ဇာတ်လမ်းထဲပါလာခဲ့တယ် ။ ဒန်နီယယ် အသတ်ခံရပြီး တိပ်ခွေကြောင့် N.S.A တွေ ဒင်း နောက်ကိုလိုက်ကြရမှာတော့ နောက်ဆုံး အသတ်ခံရမလား လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်မလား ဆိုတာတော့....... မလွတ်တန်းကြည့်မယ့်အက်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဘာသာပြန်သူကတော့ စည်သူထက် ပါ) ======================= ဒန္နီယယ္ဇာဗစ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့ေၾကး ...
Mulan (1998) Mulan (1998) IMDb Rating (7.6/10)_____Rotten Tomatoes (86%) ဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးဟာ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကို ပြန်လည်ပြီး ဇတ်လမ်းဖွဲ့ ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်… တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်နေချိန်မှာ ယခင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သက်ကြီးစစ်သားဟောင်းများကို ပြန်လည် ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် အကယ်၍ သက်ကြီးစစ်သားနှင့်အရာရှိများက စစ်ထဲ မလိုက်နိုင်အောင် ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေခဲ့ရင် အိမ်တွင်ရှိသော သား တူ မြေး ယောင်္ကျားသား တစ်ဦးစီကို စစ်ထဲသို့ ပို့ပေးပါရန် ဘုရင်မင်းမြတ်က အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်… အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မုလန် ရဲ့ အဖေဆီသို့ ထိုစာချွန်လွှာ ရောက်လာတဲ့အချိန် ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ အဖေကို ကြည့်ရင်း တစ်ဦးထဲသော သမီးဖြစ်သူ မုလန် ဟာ ကွယ်လွန်ပြီးသော ဘိုးဘွားတွေ ရဲ့ မှတ်တိုင်များရှေ့တွင် ဆုတောင်းပြီး ဖခင် မသိအောင် ဖခင်စစ်ဝန်တန်ဆာတွေ ခိုးဝတ်ကာ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်… ယောင်္ကျားလေးကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပြီး စစ်မြေပြင်ကို ထွက်ခွာသွားသော ဖခင်ချစ်တဲ့ မုလန် လေးကို မြင်တဲ့ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ဘိုးဘွားများဟာ ...
EverAfter(1998) Ever After Cinderella Story (1998)IMDb ..........7.0 Rotten.... 91%ဒီတစ္ေခါက္ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ပုိင္းက ႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္.....ကေလးဘဝကတည္းက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကတဲ့ စင္ဒရဲလားရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းကုိေတာ့ အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလုိေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္.... ဒါေပမယ့္ ဒီကားေလးမွာ စင္ဒရဲလားရဲ႕ ဘယ္လုိဗား႐ွင္းေလးနဲ႔ ပုံေဖာ္သြားမလဲဆုိတာကေတာ့ တကယ္ကုိစိတ္ဝင္စားစရာပါ..... မင္းသမီးႀကီး Drew Barrymore ရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ဟန္ေလးေတြနဲ႔ စင္ဒရဲလားအသစ္ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ျမင္ရမွာပါ... သူ႔ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္သီးျခားေလးနဲ႔ မူလေက်ာ႐ိုးမပ်က္ဇာတ္လမ္းေလးကုိလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမွာပါ..... ၁၉၉၈တုန္းက ႐ုိက္ခဲ့တာဆုိေပမယ့္ Drew Barrymoreရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးေတြကုိၾကည့္ရတာ နဲ႔တင္ ေ႐ွးေဟာင္းကားတစ္ကားဆုိတာေတာင္ ေမ့သြားေလာက္မွာပါ .......ဇာတ္လမ္းအၫႊန္းနဲ႔ ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Yoon Wah wah Theint ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ File Size : (950 MB) and (403 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:01:00 Genre : Comedy, Drama, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Yoonwahwah Theint Encoded ...
Dark City (1998) Dark City 1998IMDB 7.7 , Rotten Tamatoes 78% ရထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သိပ္ပံကားကောင်းလေးပါ. Knowing (2009) The Crow(1994), Gods of Egypt (2016) တို့လို နာမည်ကြီးကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ Alex Proyas ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Rufus Sewell နဲ့ အရမ်းလှတဲ့ မင်းသမီး မမ Jennifer Connelly တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ မမ က အပြုံးအရယ်အခန်းတွေ နည်းပြီး အမှိုင်ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်ပေမယ့် လှမြဲလှနေဆဲပါ။ သူ သီချင်းဆိုတဲ့အခန်းလေးတွေ အားရဖို့ အရမ်းကောင်းချက်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းက Mystery ဆန်လွန်းတော့ အပေါ်ယံလောက်ပဲ ပြောပြပါရစေ။ လူတစ်ယောက် ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ရုတ်တရက် နိုးလာတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းမသိ ဘယ်ရောက်နေမှန်းလဲ လုံးဝ မှတ်ညဏ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်။ သူသိတာဆိုလို့ ဟိုတယ်မန်နေဂျာ သူ့ကို လှမ်းခေါ်တဲ့ မစ္စတာ ...
Quest for Camelot(1993) Quest for Camelot(1993)IMDb......6.3ဆိုတဲ့ Animation ကားကေတာ့ IMDb rating (6.3) ရရွိထားျပီး musical fantasy အမ်ိဳးအစားေလးပါ။ဒီဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာေတာ့ ေကလီဆိုတဲ့ ကေလးမေလးက သူ႕အေဖလိုမ်ိဳး သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အေဖကေတာ့ ကမ္းမေလာ့ျမိဳ႕ရဲ႕ ဆာဘြဲ႕ရ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး နာမည္ကေတာ့ ဆာလုိင္ႏုိလုိ႕ေခၚပါတယ္... တစ္ေန႕ လူဆုိးတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရင့္ကုိလုပ္ႀကံေလေတာ့ ဆာလုိင္ႏုိက ၀င္ေရာက္ကာကြယ္ေပးခဲ့တယ္.. ဘုရင္က ဘာမွမျဖစ္ေပမယ့္ ဆာလုိင္ႏုိတစ္ေယာက္ အသက္ေပးခဲ့လုိက္ရတယ္... လူဆုိးလည္းထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတယ္.... ေကလီနဲ႕သူ႕အေမတုိ႕အတြက္ ေရႊေတာင္ႀကီးၿပိဳလုိက္သလုိပါပဲ..... ဒီ Animation ကားေလးကေတာ့ King Arthur တုိ႕လက္ထက္ကုိအေျခခံရုိက္ကူးထားၿပီး ေတာ္ေတာ္ကုိဆြဲေဆာင္မႈရွိပါတယ္... သီခ်င္းေလးေတြလည္း ဇာတ္ကြက္အလုိက္ အလွပဆုံးထည့္က်ဴးထားသလုိ တင္ဆက္ပုံေတြကလည္း တကယ့္ကုိေကာင္းမြန္ပါတယ္.... ဇာတ္လမ္းအစကေနအဆုံးထိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး အဖမဲ့ ကေလးမေလး ေကလီရဲ႕ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ပုံေတြ ေရွးေခတ္ သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ သူရဲေကာင္းဆန္မႈေတြ.. ယုတ္မာေတြတဲ့သူေတြ႕ရဲ႕ ေၾကာက္စရာေကာင္းေတြဆုိးယုတ္မႈေတြကုိ ျပထားတာပါ...မိသားစုနဲ႕အတူႀကည့္လုိ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ Animation ကားေကာင္းေလးတစ္ကားျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးပါရေစ... ဇာတ္လမ္းအညႊန္းနဲ႕ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Megumi ပဲျဖစ္ပါတယ္...File Size : (800 MB) and (316 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:26:00 Genre ...
Quest for Camelot(1993)
Bride of Chucky (1998) ဒီကားမှာတော့ Chucky အပြင်နောက်ထပ်အရုပ်တစ်ရုပ်ပါလာမှာပါ...အဲအရုပ်ကလည်း Chucky ရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ပိုဆိုးလာကြတော့မှှာပါ... File Size : (886 MB) and (340 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 29 min Format : Mp4 Genre :Comedy , Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Pyay Hlwan Aye Encode by Moe Myint Lwin
Godzilla (1998) ဟောလိဝုဒ်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ ဂေါ်ဇီလာဇာတ်ကားပါ။ဂေါ်ဇီလာဇာတ်ကောင်ကို မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီး အားပေးမှုအတော်အတန်ရရှိခဲ့သလိုဝင်ငွေလဲကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကနေအစပြုလို့ ဂေါ်ဇီလာပါဝင်တဲ့ MonsterVerse ဇာတ်ကားတွေ တောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ File size…(2.3 GB) and (1.2 GB) Quality….Blu-Ray 1080p & 720p Format…mp4 Duration….02:20:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
The Negotiator(1998) The Negotiator(1998)IMDb....7.3,,,,,,, Rotten...75%ဒန္နီ ရိုမန္ (Samuel L. Jackson) ဆိုတဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ဟာ ခ်ီကာဂို ရဲဌာနမွာ Negotiator လုပ္ရတဲ့ ရဲတစ္ေယာက္ေပါ့….Negotiator ဆိုတာ ျမန္မာလိုဆိုရင္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူေပါ့ ….သူ႕ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ျပန္ေပးဆြဲအမႈေတြ ဓားစာခံအမႈေတြမွာ သူက ဓားစာခံေတြ မထိခုိက္ေအာင္ အနာတရ အေသအေပ်ာက္မရွိေအာင္ျပန္ေပးသမားနဲ႕ စကားေျပာေပးရတဲ့သူေပါ့… သူေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းဟာ ျပန္ေပးသမားရဲ႕ စိတ္အေျခအေနကုိအဆုိးဘက္ကုိအနည္းငယ္ေရာက္ေစရုံနဲ႕ ဓားစာခံရဲ႕ အသက္အခ်ိန္မေရြးေပ်ာက္သြားႏုိင္သလုိ အျခားမလုိလားအပ္တဲ့ ျပသနာေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္....ဒန္နီရုိမန္ကေတာ့ ျပန္ေပးသမားကုိ သိမ္းသြင္းၿပီး ေျဖရွင္းတဲ့အပိုင္းမွာ အထူးကြ်မ္းက်င္သလုိရုပ္ျမင္သံၾကားမွာလည္း မၾကာခဏ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခံေနရတဲ့ သူေပါ့…...လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြကလည္း သူ႕အေပၚေလးစားၾကတယ္....တစ္ေန႕ေတာ့ ရဲဌာနထဲမွာ ရံပံုေငြေတြကို ေဒၚလာသန္းနဲ႕ ခ်ီျပီး အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ အမႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္…...ဒီကိစၥကုိ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ဒီအမႈကို ဒန္နီရိုမန္ လုပ္တယ္ဆိုျပီး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခံလုိက္ရတယ္...ဒီေထာင္ေခ်ာက္ဆင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြရဲ႕ရြံ႕မုန္းတဲအၾကည့္ေတြရခဲ့တဲ့အျပင္ မီဒီယာေတြရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေတြမွာလည္းအက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ရြံစရာအေကာင္းဆုံး လူသားအျဖစ္အေဖာ္ျပခံလုိက္ရတယ္...ဒန္နီရုိမန္အတြက္တကယ့္ကုိ ကမၻာပ်က္တဲ့အခုိက္အတန္႕ပါပဲ....ကုိင္း ဒီအမႈႀကီးကုိ ကုိ ...
Small Soldiers (1998) ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးခလေးဘဝကို ပြန်ခံစားမိမှာအမှန်ပါပဲဲဟိုးအရင်က ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားဆိုလဲမမှားပါဘူး။Heartland အရုပ်စက်ရုံဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပါ Hearland Play Service ကတော့အရုပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကြီးပေါ့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ဂေးမာစ်းတစ်ယောက် သူ့ကုမ္ပဏီကအရုပ်တွေကိုသာမန်အရုပ်တွေနဲ့မတူ တမူထူးခြားအောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်မိတဲ့အခါမှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကလေးကစားစရာအရုပ်လေးတွေဟာ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ဆိုသလိုစောင်ဆန်းကြီးတွေ လုပ်လာပါတော့တယ်အရုပ်တွေစောင်ဆန်းအကွက်တွေနင်းလို့တိုင်ပတ်နေတဲ့လူငယ်လေးအယ်လန်တစ်ယောက် ဒီအရှုပ်တော်ပုံကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။Small Soldier ဇာတ်ကားဟာ သာမန်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ကလေးကြိုက်ကားလို့ထင်ကြေးပေးနိုင်ပေမယ့် သေချာခံစားကြည့်ရှုရင်အတော်လေး ခွီရတဲ့အပြင် မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကခံစားချက်လေးတွေကို ခံစားရမှာပါကလေးဘဝတုန်းကတော့ အသဲယားစရာကောင်းတဲ့စစ်သားရုပ်တွေကိုအော်ဂလီဆန်ခဲ့တယ် လူငယ်ဖြစ်လာတော့ဟာသအထွေအထူးမထည့်ထားပေမယ့် အတော်လေးဗိုက်အောင့်လောက်အောင်ခွီရတဲ့ကားမှန်းသိလာတယ် ဟုတ်တယ်လေ။လက်တစ်ဖဝါးစာစစ်သားရုပ်လေးတွေ တကယ့်တိုက်ပွဲဝင်စစ်သားတွေလိုအတည်ပေါက်နဲ့အမိန့်တွေပေး mission တွေလုပ်နေတာကိုကြည့်ရတဲ့အရသာကတမျိုးလေးဗျ Long Long ago Spiderman Triologyထဲကမင်းသမီးချောလေးပါတွေ့ရတော့ကြည့်ရတာ မတန်ဘူးလို့ ငြင်းချက်ထုတ်စရာမရှိပါဘူး။ကလေးကားပေမယ့် ကလေးတကာ့ကလေးကားတွေထဲကခွဲထွက်လာတဲ့ လူငယ်တွေကို ရသတမျိုးအထူးဆန်းခံစားစေမယ့် ကားလေးလို့ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Hein That Naing ဖြစ်ပြီး Arkar Phyo မှ Encode ပေးထားပါတယ်။) File Size : ...
Six Days Seven Nights (1998) Six Days, Seven Nights (1998)နာမည္ေက်ာ္ေဟာလိဝုဒ္မင္းသားႀကီး ဟယ္ရစ္ဆင္ဖို႔ဒ္ပါဝင္တဲ့ စြန္႔စားခန္းဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ထြက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။အခ်စ္၊ အလြမ္း၊ အၾကမ္းနဲ႔ ဟာသကို ေရာေႏွာ တင္ဆက္ထားတဲ့ အဲဒီဇာတ္လမ္းဟာ ကြၽန္းေလးတစ္ကြၽန္းကို အေျချပဳ ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ဇာတ္လမ္းမွာ လက္ထပ္ခါနီး ခရီးထြက္လာၾကတဲ့ စံုတြဲေလးၾကားမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဂြက်က် ေလယာဥ္မႉးႀကီးရဲ႕ စြန္႔စားခန္းက ဘယ္လိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းမလဲ ထင္မွတ္မထားတာေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ လူေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားၾကသလဲ ဆိုတာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၾကည့္႐ႈၾကရမွာပါ။ဇာတ္လမ္းမွာ အဓိကဇာတ္ေကာင္ေတြအျဖစ္ Harrison Ford, Anne Heche နဲ႔ David Schwimmer တို႔က ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။(ရုပ္ရွင္အညႊန္းနဲ႔ ဘာသာျပန္တင္ဆက္ထားသူကေတာ့ Cherry Mon ပါ။) File size…(1 GB) and (500 MB) Quality….WEB-DL Rip 720p Format…mp4 Duration….01:42:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Cherry Mon